Nintendo wuxuu bilaabay kulankiisii ​​quraafaadka ahaa ee Dr. Mario World ee loogu talagalay iOS | Wararka IPhone
Maalintii baa timid, wiilashii Nintendo wuxuu ku dhawaaqay in bisha Luulyo 10 ay bilaabi doonaan halyeeyga cusub ee Mario, Dr. Mario World, laakiin wixii khilaafaad ah oo dhan ayay horay u sii socdeen. Waana tan iyo shalay galab markii horeba waxaan soo dejin karnay tetris-kan waalan ee saaxiibtinimada Mario Bros uu ku leeyahay door hogaamineed. Cayaar marka hore timaadda macruufka kahor intaan la bilaabin Android bisha soo socota.
Ciyaar khayaali ah maadaama ay qayb ka tahay bilowgii warshaddii Nintendo ee Mario Bros, taas oo ay ku jirtay waxaan u baahan doonnaa inaan dilo dhamaan bakteeriyada midabada adigoo u diraya daawooyin, ama kaabsal midab leh. Ka dib boodboodka waxaan kuu sheegi doonaa wax badan oo ku saabsan kulankaan cusub ee Nintendo uu doonayo inuu kusii wado joogitaanka qalabka mobilada ee ragga ka socda Cupertino.
Sida aad ku aragtay fiidiyowga xayeysiinta ah ee Nintendo sii daayay, hawlgalka ciyaarta waa mid aad u fudud. Kaliya waa inaan tagnaa dhaqaajinta kaabsoolooyinka kala duwan ee u soo baxa inay isku dhejiyaan saddex qaybood leh bakteeriyo isku midab ah kaabsoolka. Sidaas inta lagu guda jiro 100 heerar iyada oo loo marayo adduunyo kala duwan oo kordhin doona dhibaatada ciyaarta. Waan awoodnaa ciyaaro marka lagu daro Mario oo leh Peach, Bowser, Koopa, Troopa iyo Goomba. Oo ugu fiican oo dhan, waxaa jira a habka multiplayer Taas oo aan kula tartami karno asxaabteena, oo xitaa ku caawin karno iyaga oo diraya qalbiyo.
Waad ogtahay, orod si aad u soo dejiso ciyaarta cusub ee Nintendo, Dr. Mario World, oo aad ku raaxaysato inaad disho dhammaan bakteeriyada daadadka ku haysa adduunka Super Mario Bros. A ciyaar kaamil ah wakhtigaas firaaqada ah ee aan haysanno xilliyada fasaxyada Xagaagii. Mar dambe ma dhiman doonaan inta aan sugeyno basaska ama diyaaradaha. Ciyaar sidaan kuu sheegayno tahay gratuito (oo leh micropayments si loo dhameystiro heerarka si dhakhso leh) iyo universal si aad uga ciyaari karto iyada oo loo marayo wax kasta oo iDevices aad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Nintendo wuxuu bilaabayaa ciyaartiisa quraafaadka ah ee Dr. Mario World ee loo yaqaan IOS